तपाईंको समस्या, हाम्रो सहयोग प्रयास – ४ - Safal Stories
Home Reader's Blog तपाईंको समस्या, हाम्रो सहयोग प्रयास – ४
प्रश्न : म एकदम दु: ख गरेर हुर्केकी हूँ। म ६ कक्षामा पढ्दै गर्दा, मेरो आमा बित्नुभो र केही समय अगाडी क्यान्सरका कारण बुवा बित्नुभो । मेरो बहिनीहरु छन्। घरको सबै जिम्मेवारी ममाथि छ, म मेरा बहिनीहरुको अभिभावक हूँ । मैले अहिले स्कुलमा पढाइरहेकी छु। तर, मेरो रुची गायनमा छ। म गायनको तालिम लिन चाहन्छु, तर घरको जिम्मेवारी छोडेर हिंड्न सक्दिन र सहर बसेर गायनको तालिम लिन पनि पैसा छैन। यसैकारण म चिन्तित हुन्छु, म के गरूँ ?
हामीलाई विश्वास गरेर आफ्नो कुरा बाँड्नुभएकोमा धन्यवाद । दु : खका पहाडहरु हरेक मानिसको जीवनमा आउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा सम्हालिएर अगाडी बढ्नु ठूलो कुरा हो र तपाईंले त्यो गरिरहनुभएको छ । यस अर्थमा त, तपाईंले हामीलाई जीवनको पाठ पढाइरहनुभएको छ । आफ्नो रुचीलाई एकातिर थन्काएर दायित्व पूरा गर्न लागिपर्नुभएकी हजुरलाई नमन ! तपाईंले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो रुचीलाई भने चटक्कै नछोड्नुहोस् । कुनै पनि कामको लागि, तालिम भन्दा ठूलो कुरा निरन्तरता हो । स्कुलका कार्यक्रम देखि गाउँका कार्यक्रममा समेत गाइरख्नुहोस् । गायनलाई निरन्तरता दिन सक्नुभयो भने, तपाईंमा पक्कै पनि निखारता आउनेछ र कुनै दिन आवश्यक तालिमको पनि पहुँच तपाईंसामु पुग्नेछ । जिल्लास्तरीय विभिन्न उत्सव र प्रतियोगिता हुन्छन् , त्यहाँ भाग लिनको लागि नहिच्किचाउनुहोस् । हामी अहिले सुरुवाती चरणमा भएका कारण सहयोगी कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनौं र हाम्रो नेटवर्क पनि विस्तार हुने क्रममा नै छ । हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था आएमा हामीले तपाईंलाई सूचना दिनेछौं । हालको अवस्थालाई भने, हामीले तपाईंलाई हौसला दिने किसिमका सामग्री पोस्ट गर्छौं, ती सामग्रीहरुलाई पढ्नुहोस्, आफ्नो रुचीलाई निरन्तरता दिनुहोस् । निराश नहुनुहोस् , तपाईंले आफ्नो जीवन आफै सुन्दर बनाइसक्नुभएको छ र अझ बनाउन सक्नुहुनेछ ।
Previous२६ वर्षिया मोडल जो खुचिएको छाला लिएर आत्मविश्वासका साथ हिंड्दैछिन्